people Nepal » ओलीलाई आफ्नै सांसदको ‘झापड’ ! ओलीलाई आफ्नै सांसदको ‘झापड’ ! – people Nepal
ओलीलाई आफ्नै सांसदको ‘झापड’ !
२४ जेठ, काठमाडौं । पूर्व प्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी ओली तिखो वचन बोल्नका लागि माहिर मानिन्छन् । हिजो मंगलबार प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन अघि पनि ओलीले आफ्नो दलको राम्रो कामभन्दा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल उनका काम, भरतपुरको मतगणनाको विवाद, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई उडाउनमैं केन्द्रित भए । डेढ घन्टाको उनको भाषण अरुको उतार्नी गर्दैमा बित्यो । लोकतन्त्र, प्रजातन्त्र र कानुनी शासनको राज उनले राम्रै गरी पढाए । उनको यस्तो पाठलाई सुरुदेखि नै नोट गरेर बसेका शेरबहादुर देउवाले थोरै र प्रचण्डले राम्रैसँग जवाफ पनि दिए ।
ओलीले आदर्श, सिद्धान्त, लोकतन्त्रको दाबी निरन्तर गरे पनि उनकै सांसदले उनको भनाई र गराईमा ‘झापड’ हानिदिए । प्रधानमन्त्रीका लागि कांग्रेसबाट सभापति शेरबहादुर देउवाले उम्मेदवारी दिए पनि एमालेले उम्मेदवारी दिएर विपक्षको बल देखाउन सकेन । अर्कोतिर संसदमा भएका आफ्ना १८१ नै सांसदलाईसमेत ओलीले उतार्न सकेनन् । आफ्नो मात्र होइन माले, नेपकिपा र जनमोर्चा आफ्नो साथमा रहेको दाबी गरेका ओलीले यी सबैको मत विपक्षमा खसाल्न सकेनन् ।
संसदमा १८१ सिट रहे पनि ५५८ मत खस्दा देउवाको पक्षमा ३८८ मत खस्यो यो खसेको मतको दुई तिहाई हो । तर, एकछिन अघि निक्कै चर्को भाषण गरेका ओलीलाई आफ्नै १८१ सांसदको समेत साथ रहेन । ओलीको भाषणलाई झापु हान्दै विपक्षमा जम्मा १७१ मत मात्र खस्यो । यो एमालेको कूल मतभन्दा पनि ११ कम हो । खसेको मतमा विपक्षी माले, जनमोर्चासहितको पनि मत छ । यस्तोमा एमालेका दुई दर्जन बढी सांसदले ओलीलाई नमिठो झट्का दिएका हुन् ।
आफ्नै सांसदलेसमेत भोट नहालेपछि ओलीलाई के भएको होला ? सायद उनले कुनै दिन यो विषयमा पनि बोल्नेछन् । आफ्नो सांसद संख्याभन्दा कम मत देउवाविरुद्ध खसेपछि ओली दुई तिहाईले निर्वाचित देउवालाई बधाई पनि नदिइकन बाहिरिएका थिए ।